दाँतमा किरा लागेर एकदमै पिडा हुन्छ ? यसरी कम गर्न सकिन्छ दुखाइ – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/दाँतमा किरा लागेर एकदमै पिडा हुन्छ ? यसरी कम गर्न सकिन्छ दुखाइ
दाँतमा कसरी प्वाल पर्छ त ?यस्को खास कारण दाँतमा किरा लाग्नु नै हो । दाँत दुरुस्त भयो भने त्यसले सुस्वास्थ्यको संकेत गर्छ । दाँतको राम्रो ध्यान दिइएन भने ती कुहिमुका साथै किरा लाग्न थाल्दछ । यस्तो अवस्थामा मुखमा अड्केका खानेकुराहरू मुखका ब्याक्टेरियाको सहायतामा एसिडमा परिणत हुन्छन्। यसले दाँतमा प्वाल बनाउँछ । प्राय हामी आज भोलि क्याभीटि भनेर बुज्छौ , यही प्वाललाई अंग्रेजीमा क्याभिटी भनिन्छ ।
यो नयाँ वर्षमा घरमा अवश्य राख्नुहोस यी ६ चिज, वर्षैभरी आउँछ सुख-शान्ति